Ubesesimi emphinjeni uCarl Neihaus - Mabe
OBEKHULUMELA uMkhonto WeSizwe Military Veterans Association (MKMVA), uMnuz Carl Neihaus, uthi uzokuphonsela inselelo ukuxoshwa kwakhe ekubeni yilungu ebelisebenzela i-ANC eLuthuli House.
Izolo i-ANC imkhombe indlela uNeihaus kulandela ukushicilela isitatimende esiveze ukuthi abasebenzi be-ANC bazoya esiteshini samaphoyisa beyovulela isigungu esiphezulu sale nhlangano icala ngokukhokhelwa imiholo yabo ngokunjalo nokuhlukumezeka okudalwa ’ubugebengu’ obenziwa abaholi.
UNeihaus ubuye wasihoxisa lesi sitatimende, wabhalela i-ANC incwadi wathi empeleni uyena ozovulela inhlangano icala. I-ANC imphendulile ntambama yambuza ukuthi kungani ezitshela ukuthi inhlangano ngeke ikwazi ukumxosha khona manje.
Inkulumompikiswano yabo iphethe ngokuthi i-ANC iqinisekise ukuthi usexoshiwe eLuthuli House, okuyinto eqinisekisekiwe okhulumela i-ANC, uMnuz Pule Mabe, ekhuluma nabezindaba izolo ntambama.
Ekhuluma kwiNewzroom Afrika, uMabe uthe i-ANC ayisakugqizi qakala ukuthi uNeihaus wake waba yilungu lesigungu esiphezulu nokuthi wayeyisishoshovu esasilwa nokucindezelwa kwabantu kuleli ngoba sekunesikhathi ebukela phansi ubuholi benhlangano obuphethe njengamanje.
“Sidinga ukukhumbuza uComrade Carl ukuthi akasekho kwisigungu esiphezulu se-ANC, ubewumsebenzi we-ANC futhi bekumele aziphathise okomsebenzi. Ngicabanga ukuthi ubuye adideke ngoba wake waba sebuholini...Uke uzwe ngisho ekhuluma, ukhulumisa okumuntu osebuholini. Usezama ukukhuluma ngamalungelo abasebenzi yena manje ekubeni engakwazi ngisho ukusikhombisa imisebenzi aseyenzele i-ANC?,” kubuza uMabe omphonsele inselelo yokuthi aveze ubufakazi bemisebenzi yakhe kwi-ANC.
Uqhube wathi labo abathola umholo kwi-ANC, bahola ngenxa yemisebenzi yabo abayenzela inhlangano, abakhokhelwa ngoba kuthanda i-ANC.
“Usithathaphi isibindi esingaka... sokukhipha isitatimende esimele abasebenzi abangakucelanga ukuthi ukwenze lokho, ekubeni wazi kahle ukuthi nawe ulinde ukuhola kwi-ANC.”
UMabe uthe ngenxa yendlela aziphatha ngayo uNeihaus ubuholi bukhethe ukumxosha.
“Kusukela namhlanje (izolo) akaseyena umsebenzi we-ANC. Simxoshile. Uma enezikhalazo, unelungelo lokusiphonsela inselelo isinqumo,” kusho uMabe.
“Kunesikhathi lapho okumele unqume khona uthi, ’lokhu ngeke sisakumela’. I-ANC ngeke ikwazi ukumela ezinye izinto ngoba kumele kuphumelele yona kuqala ngaphezu kwabantu abafuna ukudicilela phansi ubumbano olukhona kuyo.”
UMabe uthe baqedile manje ngoNeihaus, abasafuni ukukhuluma ngaye ngoba sebebheke okhethweni.